Ichi chi boka rekuverenga system iyo inoshandisa AI tekinoroji kuongorora nzvimbo hombe, Mazhinji edu Boka rekuverenga zviri patent zvigadzirwa. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaura nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire ruzivo rwakadzama nezve yeduBoka revanhu.
HPC198 AI boka rekuverenga system inotora inotungamira AI yekuona algorithm, ine 3D calibration basa, iyo inogona kuvandudza zvakanyanya kuverenga kunyatso uye nekumhanyisa, yakavakirwa-mukati AI algorithm kumberi-kumagumo isina kuona kugadziriswa kugadzirisa, otomatiki kuzivikanwa kwezvakanangwa zvinangwa, uye yakaderera-mwenje kutaridzika kwenzvimbo.
HPC198 AI boka rekuverenga system inogona kushandiswa pakuronga kwematunhu uye manejimendi, kuisirwa chero kona, yakafara simba sensor, backlight nharaunda inowedzera, uye kutsigira kwechipiri kusimudzira.
HPC198 AI boka rekuverenga systeminotsigira Chinese, Chirungu, chiKorea uye mimwe mitauro, hwakawanda hwetambo yekuona, kureba kwakapetwa kaviri hupamhi, traffic kuyerera hunhu manhamba, yakatarwa tarisiro manhamba, nzvimbo kudzora, anti-tailing kutonga, chigadzirwa rutsigiro nzvimbo zhinji-yekuonekwa, yakavakirwa-muWEB. Basa racho rinotumirwa kune dzimwe nyika uye matunhu epasirese, uye rinorumbidzwa zvikuru nevatengi. Iyo inogona kushandiswa kune vafambi kuyerera manhamba uye kuverenga munzvimbo dzakashama.
HPC198 AI boka revanhu kuverengaSisitimu inokodzera: nzvimbo dzegasi, zvimbuzi zveveruzhinji, migwagwa mikuru, nzvimbo dzekutengesa, zvitoro, zvitoro, mamuseum, dzimba dzekuratidzira, nzvimbo dzinoyevedza, mapaki, nharaunda, mafekitori, mashopu, mitsara yegungano, migwagwa mikuru, nzvimbo dzekupaka uye dzimwe nguva dzinofanirwa kuve akaverengwa. Inogona kuzvimiririra kupedzisa tarisiro yekubvuma, kuteedzera, kuverenga uye kudzora munharaunda, uye ine yakavakirwa-mukati AI yekugadzirisa chip. Inogona kushandiswa kwevatakurwi kuyerera manhamba, traffic kuyerera manhamba, mota kuzivikanwa, nzvimbo manejimendi, kuwandisa kudzora, anti-tailing kudzora uye zvimwe zviitiko. Inogona kushandiswa pane inomira-yega muchina kana online.
HPC198 AI mhomho inopokana nehunyanzvi zviratidzo
1. National standard G28181 protocol, tsigira ONVIF protocol.
2. Nzizi nhatu, mushandisi anogona kusarudza rwizi uye gadziridza iyo furemu rate, resolution uye vhidhiyo mhando.
3. Kutsigira kuyerera kwekuyerera kwemotokari, kuona kwekufamba kwevatakurwi, nzvimbo yekutsigira nzvimbo, kuyerera kwevatakurwi uye kuyerera kwemotokari kwakasanganiswa kuona.
4. Mufananidzo wacho wakajeka uye wakatsetseka uye unotsigira dhijitari 3D ruzha kudzikisira.
5. HPC198 AI Boka revanhuInotsigira otomatiki switching yemafirita kuti uone masikati nehusiku kuongorora, tsigira nharembozha yekutarisa; POE magetsi (inosarudzika).
6. Tsigira kure-chaiyo-nguva yekutarisa, network mushandisi manejimendi, network nguva yekuenderana.
7. 1 DC12V interface, 1 RS485 interface, 1 RJ45 interface, 1 yakaoma kuonana interface.
8. HPC198 AI boka revanhu Inotsigira kuona kwekufamba kwescreen / kuvharirwa kwechidzitiro, nzvimbo dzekutsvaga dze4 uye nzvimbo dzekuvhara dze4 dzinogona kuiswa.
9. Kugadziriswa kwevhidhiyo: 3840x2160 Vhidhiyo yekumanikidza standard: H.265 H.264, inotsigira ONVIF protocol, yenyika standard G28181 protocol.
10. HPC198 AI boka revanhu Tsigira otomatiki kutangazve basa mushure mekundikana kwesimba / kutadza kusatarisirwa.
11. Dhizaini giredhi dhizaini, yakapusa dhizaini, yakanyanya kunyatsoita uye yakasimba kugadzikana.
12. Tsigira hunhu superposition, superposition chinzvimbo chinogadziriswa uye otomatiki reverse ruvara kuratidza.
Zvimiro zveHPC198 AI boka revanhu
1. Vhidhiyo yekutarisa basa: HPC198 AI boka revanhu inogona kuve yakanangana neiyo DVR hard disk vhidhiyo rekodhi network yeHikvision, Dahua uye mamwe mapuratifomu, uye inogona kushandiswa seyakajairika network kamera.
2. Kuverenga nhamba: AI boka revanhu inosanganisa iyo yevatakuri yekuyerera manhamba basa, iyo isingakanganisike neanoona kona. Iyo yakanyanya nzvimbo yekutarisa inogona kuvhara kusvika pamamita makumi maviri. Iyo inogona kuteedzera makumi mashanu ekuvavarira panguva imwe chete. Zvinangwa zvinoverengwa zvinoenderana nenzvimbo yakasarudzika uye yekuverenga kuverenga kunongedzera. Passenger kuyerera manhamba, imwe chete AI boka counter inodiwa kuti uone iwo akapatsanuka manhamba eanobuda-e-muchitoro mutakurwi kuyerera uye mu-chitoro mutakurwi kuyerera.
3. Nzvimbo yekudzora, kuwandisa kwekudzora, anti-tailing control kugona: iwe unogona kugadzirisa nzvimbo renzvimbo uye kumisikidza iyo yakatarwa nhamba munzvimbo. Kana iyo nhamba yakanangwa munzvimbo iri yakakura kupfuura yakatarwa kukosha, iyo AIBoka revanhu inogona kuburitsa seti yekuchinja masaini kudzora zvigadzirwa zvemupendero Itai yambiro kana kumwe kudzora.
4.Mamiriro ekuzvigadzirisa: AI boka revanhuadopts IP65 isapinda dhizaini, iyo inogona kuita manhamba nehumwe hwacho kunyangwe ichishandiswa kunze. Kana iyo AI boka counter isingakwanise kunyatso tsanangudza tarisiro pane yakasarudzika kona, iyo yekuvavarira kudzidza uye kurovedzwa kunogona kushandiswa kuwedzera iyo yakanangwa sampuro yekuvandudza iyo yekuzivikanwa chiyero. AIboka revanhuinotsigira kumisikidza chero kona, uye mukana wekukanganiswa pasi pe backlight, backlight kana chezuva rakanyanya kuderera. Iyo inogona otomatiki kusefa mumvuri wechinangwa. Iyo sensor yemufananidzo ine yakanyanya kukwirira kwehunyanzvi inogona kuve yakajairwa kunyangwe paine isina kusimba ambient mwenje husiku. mabasa.
5. Traffic kuyerera manhamba: AI boka revanhuinosanganisa iyo traffic kuyerera manhamba basa, iyo isingakanganisike neanoona kona. Iyo yakanyanya nzvimbo yekuona inogona kuvhara kusvika makumi mashanu emamita. Iyo inogona kuteedzera akawanda zvinangwa panguva imwechete uye otomatiki kuziva iyo mota mhando. Kana iyo mota ichipfuura yakatarwa yekuverenga nzvimbo Verenga otomatiki kana Mhando dzinozivikanwa dzemotokari dzinosanganisira: mota, midhudhudhu, mabhazi, marori, uye mabhasikoro.
6. Yakavakwa-muWEB peji reji manejimendi: AI boka revanhuzvakare inopa RS485 kutaurirana interface, uye RJ45 network chiteshi, yakavhurika kutaurirana protocol inogona kutsigira yechipiri kusimudzira. AI boka revanhuine yakavakirwa-muWEB peji reji manejimendi, iyo inogona kutariswa kure kuburikidza nenzvimbo yenzvimbo network, uye inogona kuseta mhando dzenongedzo, nzvimbo dzetsika uye manhamba ehunyanzvi, uye ma parameter anoenderana. Iyo WEB manejimendi peji inosanganisa yakapusa mushumo basa, uye iyo nhamba data inogona kutariswa zvakananga munharaunda.
Kuzivikanwa kwemusoro / kuzivikanwa kwechimiro chevanhu
HPC198 AI mhomho inopikisa vhidhiyo yekuverenga kwevanhu
Tine mhando dzakawanda dze IR Boka revanhu kaunda, 2D, 3D, AI Boka revanhu, panogara paine imwe inokukodzera, ndapota taura nesu, isu tinokurudzira iyo yakakodzera kwazvo Boka revanhu zvako mukati memaawa makumi maviri nemana.
Pashure: MRB 3D Vanhu kuverenga system HPC009
Zvadaro: MRB AI Motokari kuverenga system HPC199